बन्दले जनजीवन प्रभावित »	लोकमानविरुद्धको मुद्दा सरेको सर्‍यै »	एक सय ५७ न्यायाधीशले लिए शपथ »	Monday, Jun 17, 2013<	/p>	सप्तरंग यस्तो थियो जनअदालतको "कानुन"
Comments (4) नेपाली क्रिकेटर मेरो मुटुमा छन् रोय लुक डायस, नेपालका पूर्वक्रिकेट कोच
नेपालमा बिताएका १० वर्ष
इट वाज रियल्ली अ प्लेजर ! मेरो १० वर्षको नेपाल बसाइँ धेरै रमाइलो रह्यो । कुनै वेला पनि निराश भइनँ । नेपाली र श्रीलंकनको व्यवहार उस्तै पाएँ । यहाँको र श्रीलंकाको मौसम पनि उस्तै छ । फरक केवल नेपालमा समुद्र छैन । अक्सर म मिडिया र कोलम्बोमा रहेका साथीलाई भन्ने गर्छु- नेपाल मेरो दोस्रो घर हो । अरू कुनै देश मेरो दोस्रो घर हुन सक्दैन । कारण, नेपाली क्रिकेटरहरू 'कमिटेड' छन् । उनीहरू सिक्न चाहन्छन् । सा-सानो पक्षमा समेत बुझ्न कोसिस गर्छन् । मैले त्यसै गफ दिएको होइन । यहाँको हावापानी मलाई निकै मन पर्‍यो । २००१ देखि २०१० को ग्वाङझाव एसियाडसम्म मैले नेपाली खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिएँ । यो अवधिमा खेलाडीलाई मिहिनेती, लडाकु स्वभावका र भलादमी पाएँ । यहाँ प्रशिक्षण गर्न सजिलो र गाह्रो दुवै छ । प्रशिक्षकलाई सबै जिम्मेवारी दिइएको थियो । १० वर्ष खेलाडीसँगै ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर गरे । नेपाली खेलाडीका लागि क्रिकेटभन्दा ठूलो कोही छैन । श्रीलंका र्फकंदा कसरी १० वर्ष नेपाल बसेँ भन्ने सोच्ने गर्छु । म जहाँ रहे पनि नेपाल, नेपाली र यहाँका क्रिकेटरलाई कहिले बिर्सन सक्दिनँ । यी सबै मेरो मुटुमा विराजमान छन् । यद्यपि, १० वर्ष नेपाल बस्दा पनि मैले नेपाली भाषा भने सिक्न सकिनँ, यसमा दुःख छ । सबैसित अंग्रेजीमै कम्युनिकेसन हुन्थ्यो ।
नेपाल छाडेपछिका दिन
नेपाल छाडेपछि मैले श्रीलंकाकै कोलम्बोको स्थानीय क्लब सम्हाल्ने मौका पाएँ । तिलकरत्ने दिल्सान सो क्लबका कप्तान र जीवन मेन्डिस क्लबका प्रमुख खेलाडी थिए । एक वर्ष क्लब सम्हाल्दा मैले स्थानीय यु-१९ टोलीलाई उपाधि दिलाए । जुन मेरा लागि बोनस थियो । यसैबीच, ओमानबाट राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षक बन्न प्रस्ताव आयो । जसलाई सहजै स्वीकार गरेँ । उनीहरूले तेस्रो संस्करणको एसिसी टी-२० क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि ओमानको टोली हेर्न भनेका थिए । संयोगले त्यो प्रतियोगिता नेपालमै भएको थियो । कोलम्बोपछि मेरो गन्तव्य बन्यो, ओमान । म त्यहाँ गएँ र केही काम गरेँ । दुई महिनाको तयारीपछि ओमानको टोली लिएर काठमाडौंमा टी-२० कप खेल्न आएँ । ओमानलाई तेस्रो स्थानमा राख्दै टी-२० विश्वकप छनोटमा छनोट गराउन सफल भएँ । तर, दुभाग्यपूर्ण रूपमा ओमानले १२ खेल खेल्दा केवल एक खेल मात्र जित्यो । ओमानमै रहँदा मलेसियाले मलाई प्रशिक्षक बन्न प्रस्ताव गर्‍यो । त्यति वेलै मैले मलेसियन क्रिकेट टोलीलाई बचन दिइसकेको थिएँ । छोटो समयमा ओमानलाई एउटा लेभलमा पुर्‍याएका कारण उनीहरूले मलाई त्यहीँ बस्न आग्रह गरेका थिए । तर, म बोलीको पक्का मान्छे हुँ । एकपटक भनी सकेपछि फेर्दिनँ । ओमानले मलाई धेरै राम्रो प्रस्ताव राखेको थियो । तर, मलेसियालाई बचन दिइसकेको हँुदा स्विकार्न सकिनँ । अन्ततः ११ महिना ओमानको बसाइँपछि मलेसियातिर हुइँकिएँ । कुशल कप्तान बन्दै छन् पारस
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पछिल्लो समय उत्कृष्ट नतिजा निकालिरहेको छ । खेलाडी, प्रशिक्षक तथा क्यानको मिहिनेतका कारण नेपालले यसै वर्ष मात्र दुई प्रमुख उपाधि जित्न सफल भयो । यसको प्रमुख श्रेय कप्तान पारस खड्कालाई दिन चाहन्छु । मलेसियामै सम्पन्न आइसिसी विश्वकप डिभिजन-४ मा नेपालले अमेरिकालाई हरायो । डिभिजन-४ मा नेपालको प्रत्येकजसो खेल मैले नियालेको थिएँ । अझ मलेसियालाई १० विकेटले हराउँदा नेपाली क्रिकेटको स्तर धेरै माथि गएको महसुस भयो । कप्तान पारसको कुशल नेतृत्वकै कारण यो सम्भव भएको हो । यसपटक नेपाल आउँदा विगतभन्दा पारसलाई बेग्लै क्रिकेटरका रूपमा पाएँ । उनी निकै परिपक्व भइसकेका रहेछन् । उनको लिडरसिपलाई मान्नैपर्छ । एक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरसित हुनुपर्ने सबै गुण पारसभित्र देख्छु । अहिले उनको कुशल कप्तानीमा नेपालअगाडि बढिरहेको छ । पारसको नेतृत्वमा नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एकपछि अर्को उत्कृष्ट नतिजा निकालिरहेको छ । सबै मेरा हिरोहरू
मेराे नजरमा सबै नेपाली खेलाडी हिरो हुन् । को नराम्रो र उत्कृष्ट भन्न मिल्दैन । आवश्यक परेको वेला सबै खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । यसकारण एक वा दुई उत्कृष्ट खेलाडी छान्न गाह्रो छ । कनिष्क चौगाईं, शक्ति गौचन तथा पारस खड्का उमेर समूहमा नै हिरो थिए । सिनियर समूहमा महबुब आलमलाई बिर्सिन मिल्दैन । अमेरिकाको न्यु जर्सीमा डिभिजन-५ खेल्ने क्रममा महबुबले विश्वकीर्तिमानी १० विकेट लिए । समग्रमा एक खेलाडीलाई मात्र हिरोभन्दा अन्यलाई अन्याय पर्छ । नेपाली क्रिकेटरसँग अहिले पनि मेरो सम्बन्ध सुमधुर छ । हामीले एकअर्कालाई बिर्सेका छैनौँ । सायद दश वर्षसँगै बसेका कारण पनि होला, नेपाली खेलाडीसँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ । अझ विनोद दास र शक्ति गौचनसित नियमितजसो कुराकानी हुन्छ । कहिलेकाहीँ उनीहरूसँग इमेल, च्याट आदि सञ्चार माध्यमबाट कुराकानी गर्छु । गत भदौमा मलेसियामा सम्पन्न विश्वकप डिभिजन-४ मा सहभागिता जनाउनुअगाडि १० खेलाडी श्रीलंकामा अभ्यास गर्न आएका थिए । संंयोगले त्यस वेला म पनि श्रीलंकामै थिए । ती सबै खेलाडीलाई एक दिन मेरो घरमा रात्रि भोजका लागि बोलाएँ । मेरो परिवारसँग समेत नेपाली खेलाडी निकै नजिक छन् । मेरी श्रीमती पनि उनीहरूलाई आफ्नै छोराझँै सम्भिmन्छिन् । नेपाल विश्वकपको सपनानजिक
नेपालले विश्वकप क्रिकेट कहिले खेल्छ ? यो प्रश्नको उत्तर मैले धेरैपटक दिएँ । प्रशिक्षणको सुरुवाती दिनमा मैले भन्ने गर्थें, नेपालले सन् २०१५ को विश्वकप खेल्छ । क्यानका पदाधिकारी तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवद्वय विनोदशंकर पालिखे तथा किशोरबहादुर सिंहलाई धेरैपटक त्यही उत्तर दिएँ । आठ वर्षअगाडि मैले बोलेको कुरा अब पूरा हुँदै छ । नेपाल सन् २०१५ को विश्वकप खेल्ने सम्भावनाको नजिक छ । यदि नेपालले आइसिसी डिभिजन-२ चरणसम्म स्थान बनायो भने सपना साकार हुनेछ । तर, दुःख के लाग्छ भने म नेपाली टोलीसित रहिनँ । नेपाल यसै महिना बर्मुडामा छनोट खेल्न जाँदै छ । त्यहाँ नेपालले राम्रो नतिजा निकाल्नुपर्छ । नेपाली खेलाडीको लक्ष्य डिभिजन-२ हुनुपर्छ । साथै बर्मुडामा एउटा खराब दिनसँग पनि जोगिनुपर्छ । यदि त्यो दिन छल्न सकियो भने नेपाल विश्वकप छनोटको नजिक पुग्नेछ ।
हार औँलामा गन्न सकिन्छ
नेपाली टोलीसँगै रहँदा मैले खासै नराम्रो हारको सामना गर्नु परेन । हुन त लामो समय एउटै टोलीलाई प्रशिक्षण दिँदा पचाउने नसक्ने नतिजा हुनुपर्ने हो । यस पक्षमा म भाग्यमानी ठहरिएँ । नराम्रो हारेका खेल मेरो पाँच औँलामा गन्न पुग्ने पनि छैन । तर, ओमानमा भएको एसिसिटी-२० कपमा कतारसँग हारेको क्षणले भने ज्यादै भावुक बनाउने गर्छ । यसैगरी, २००४ मा मलेसियामा भएको प्रतियोगितामा हामी कतारसँग अप्रत्याशित रूपमा पराजित हुँदा म स्तब्धै भएको थिएँ । भर्खर क्रिकेटमा प्रवेश गरेको कतारसँग कसरी नेपाल हार्‍यो भन्ने प्रश्न अहिले पनि छ । साथै, विश्वकप डिभिजन-५ छनोटमा तान्जानियासँगको हारलाई धेरै पीडादायी रूपमा लिने गर्छु । सो हारले नेपाललाई सन् २०११ को विश्वकप क्रिकेट छनोटबाटै बाहिर पठायो । त्यसकारण, म अहिले पनि भन्ने गर्छु- क्रिकेटमा एक खराब दिनबाट जोगिनुपर्छ ।
खुसीको कुरा गर्दा नेपाल यु-१९ विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको प्लेट च्याम्पियनसिप जित्दा म असाध्यै खुसी भएको थिएँ । त्यो प्रतियोगिता श्रीलंकामै भएको थियो । श्रीलंकाली भूमिमा मलाई केही देखाउनु थियो, नेपाली टोलीको पक्षमा । नभन्दै नेपालले यु-१९ विश्वकप क्रिकेटको प्लेट च्याम्पियनसिप जित्यो, त्यो क्षण मेरो जीवनकै अविश्मरणीय थियो । नेपाल च्याम्पियन भएपछि मेरो खुसीको सीमा नै रहेन । अर्को खुसीको क्षण, आइसिसी विश्वकप डिभिजन-५ को उपाधि जित्दा बन्यो । त्रिवि मैदानमा नेपालले अमेरिकालाई हराउँदै पहिलोपटक ठूलो एकदिवसीय क्रिकेट उपाधि जित्यो । यसअघि नेपालले आइसिसीको ठूलो उपाधि जित्न सकेको थिएन । सन् २०१५ को विश्वकप क्रिकेटमा छनोट हुने पहिलो खुड्किलो पार गरेको क्षणमा पनि म त्यत्तिकै खुसी भएको थिएँ । अर्को खुसीको क्षणका रूपमा मैले त्रिकोणात्मक इन्टरकन्टिनेन्टलको उपाधि जितेको दिनलाई लिने गरेको छु । नेपालसँग असंख्य दर्शक
क्रिकेट विकासको एउटा प्रमुख पाटो भनेको दर्शक पनि हो । जुन नेपालसँग छ । दर्शकविनाको क्रिकेट खल्लो हुन्छ । दर्शकको साथ रहँदा टोली हौसिने गर्छ । दर्शकले खेलाडीको मनोबल उच्च पार्न सहयोग गर्छन् । यसमा कुनै शंका छैन, टेस्ट नखेल्नेमध्ये नेपाल मात्र यस्तो मुलुक हो- जोसँग हजारौँ दर्शक छन् । नेपालको हकमा यो एउटा प्लस-प्वाइन्ट भन्नुपर्छ । मलेसिया र अरबी मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट हुँदा पनि सयको हारहारीमा दर्शक आउँदैनन् । अझ यसपटकको टी-२० कपमा नेपाली दर्शकको उपस्थितिबाट ज्यादै हषिर्त छु । नेपालमा रहँदा मैले यति ठूलो भीड कहिल्यै देखिनँ । भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति
दुई वर्षअगाडि नेपाल आउँदाको अवस्था हेरी यहाँ धेरै परिवर्तन भइसकेको रहेछ । भौतिक पूर्वाधार बिस्तारै बनिरहेको छ । जुन क्रिकेट विकासका लागि अति आवश्यक पक्ष हो । मूलपानीको मैदानअगाडि बढिरहेको छ । विशेषतः त्रिवि मैदानमा धेरै परिवर्तन पाएँ । नेपालमा इन्डोर सुविधा पनि बनाउने तयारी भइरहेको सुनेको छु । क्यानले क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरी राम्रो काम गरेको छ । यद्यपि, नेपाल र मलेसियाबीचको सुविधामा धेरै फरक छ । सुविधाको पक्षमा मलेसिया नेपालको तुलनामा धेरै सम्पन्न छ । नेपालमा पुराना खेलाडीहरू विनोद दास, राजु बस्नेत, दीपेन्द्र चौधरीलगायतले काम गरिरहेका छन् । नेपाल र मलेसियाबीच धेरै फरकनेपाल क्रिकेटर मिहिनेती र लडाकु छन् । क्रिकेटप्रति उनीहरूको लगाव मान्नैपर्छ । अझ उनीहरूलाई 'मेरा केटा' भन्न मन लाग्छ । १० वर्षसँगै बसेकाले होला, अहिले पनि उनीहरूलाई आफ्नै बालबच्चाका रूपमा लिने गरेको छु । नेपालको प्रशिक्षकका रूपमा काम गर्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म खेलाडीहरूसँगै हुन्थेँ । चाहे त्यो अभ्यास सत्र होस् वा प्रतियोगिता, हरहमेसा म खेलाडीकै माझ बस्थेँ । यसविपरीत मलेसियन क्रिकेटरको कुरो धेरै फरक छ । उदाहरणका लागि चौथो संस्करणको एसिसिटी-२० कै कुरा गरौँ, नेपाल आउनुअगाडि मुस्किलले चार वा पाँच खेलाडीका साथ १८ दिन मात्र अभ्यास गर्न मौका मिल्यो । टोलीमा रहेका आठ खेलाडी विश्वविद्यालयमा पढ्छन् । ती आठ खेलाडी लेक्चरर पनि हुन् । जसकारण, उनीहरूसँग अभ्यास गर्ने समय थिएन । मलेसियन सरकारले पहिलो प्राथमिकता शिक्षालाई राखेको छ । त्यसपछि मात्र क्रिकेट । मलेसियन क्रिकेटको यो नै प्रमुख समस्या हो । फुर्सद पाउँदा मात्र खेलाडीहरू एकै साथ हुन्छन् । नेपालविरुद्ध अर्धसतक ठोकेका कप्तान सुहन कुमार सीधै अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आएका थिए । उनले एक दिन मात्र अभ्यास गरे । नेपालसँग १९ रनले पराजित भए पनि मलेसियाले नेपाललाई कडा चुनौती दिएको थियो । यदि सबै खेलाडीलाई नियमित अभ्यास गराउन पाएको खण्डमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकिन्थ्यो होला ? मलेसियन खेलाडी प्रतिभावान छन् । तर, उनीहरू पढाइमा व्यस्त छन् । क्रिकेटमा उच्चस्तर भेटाउनुछ भने नियमित अभ्यास गर्नुपर्छ । अनुभवको आधारमा मैले मलेसियन क्रिकेटरलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छु । नेपाल भएको टी-२० मा मलेसिया समूह चरणबाटै बाहिरिँदा केही दुःख छैन । हामीले लिग चरणको खेलमा सिंगापुरलाई हराएका थियौँ । त्यो खेलबाट म निकै खुसी छु । अझ मभन्दा मलेसियन क्रिकेटर ज्यादै खुसी देखिन्थे । मलेसिया र सिंगापुरले एकअर्कालाई चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा लिने गर्छन् । उनीहरू एकअर्कासित हार्न चाहँदैनन् । मलेसिया र सिंगापुर भनेको भारत र पाकिस्तानजस्तै हुन् । एक आपसलाई देखी नसहने ।
एक्स्पोजरको वेला भइसक्यो
नेपालले थप उचाइ हासिल गर्न खेलाडीलाई एक्स्पोजर गर्ने वेला भइसकेको छ । वर्तमान समय नेपाली क्रिकेटले टेस्ट नखेल्ने राष्ट्रमा फरक स्थान बनाइसकेको छ । तर, यतिले पुग्दैन । खेलाडीलाई बढीभन्दा बढी बाहिर खेल्न पठाउनुपर्छ । खेलाडीलाई भारतको रणजित ट्रफीबराबर क्लब वा अन्य विदेशी लिगमा खेलाउने पहल हुनुपर्छ । साथै, क्यानले भौतिक पूर्वाधारमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । त्रिवि मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्छ । क्रिकेटमा व्यावसायीकरणको युग आइसकेको छ । यो पक्ष राम्ररी लागू भएको पाउँदिनँ । क्रिकेट विकासको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको प्रोफेसनालिज्म हो ।
नेपाल फर्किने इच्छा
ग्वान्झाव एसियाडको असफलतापछि म निराश भएँ । मैले कम्तीमा नेपाललाई कास्य पदक दिलाउनुपर्ने थियो । त्यो चाहना पूरा गर्न सकिनँ । सन् २०१० को डिसेम्बरपछि क्यानले सम्झौता नवीकरण नगरेपछि श्रीलंका फर्कें । पुनः नेपाल र्फकेर नेपाललाई प्रशिक्षण दिन मन छ । तर, त्यो सम्भव छैन । यहाँका मानिस, क्यानका पदाधिकारी तथा क्रिकेटरहरू आफ्नो खेललाई असाध्यै माया गर्छन् । जसबाट निकै प्रभावित छु । नेपालीको मन खुला छ । ओमान र मलेसियामा यस्तो क्रेज देखिनँ । श्रीलोचन राजोपाध्याय
Add new comment किन फुटे कम्युनिस्६हरू ?
विघटित संविधानसभामा कम्युनिस्टहरूको मत ६२ प्रतिशत थियो । माओवादी, एमाले, माले, जनमोर्चा, नेमकिपालगायत सबैले कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा मत मागेका थिए । तर, पनि उनीहरू एक ठाउँमा उभिन सकेनन । कम्युनिस्ट पार्टी प्रगतिशील एजेन्डा उठाउँछन्, त्यसले जनमत बटुल्छ । तर, कार्यान्वयनमा चुक्छन् । बरु त्यसकै बहानामा पार्टी फुट्छन् । फुटपछि सैद्धान्तिक र कार्यगत मात्रै होइन, व्यक्तिगत गालीगलोजमा समेत उत्रन्छन् ।कम्युनिस्ट पार्टीका एक मात्र जीवित संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्य भन्छन्, 'कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण भएर जानुपर्ने हो । नाममा माक्र्सवादी र लेनिनवादी भने पनि विचार मिल्दैन अनि फुट्छन् ।' कर्माचार्यका अनुसार फुट्नेहरू सबै सिद्धान्तका कारणले नै फुुटेका भने हुँदैनन्, व्यक्तिगत स्वार्थले पनि फुट्छन् । 'पार्टी संस्थापक भएको नाताले भन्नुपर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्नु हँुदैनथ्यो । फुटेकोमा मलाई दुःख लाग्छ, माक्र्सवादी र लेनिनवादीहरू वर्ग संघर्षका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने तर त्यसो भएको छैन,' कर्माचार्य बताउँछन् । वर्ग संघर्ष छाड्ने कम्युनिस्ट हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ । तर, विचार नमिलेपछि पार्टी फुट्नु स्वाभाविक भएको उनको ठहर छ । उनको भनाइ छ, 'वर्ग संघर्षलाई आधार बनाएर हिँडेका कम्युनिस्टहरू आ-आफ्नै हिसाबले अघि बढेका छन् । कतिपय नाम मात्रका पनि कम्युनिस्ट पार्टी छन् ।' आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का भएर जान नसके पनि कार्यगत एकता गरेर जान सक्ने उनको आशा छ । एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा पुराना वामपन्थी नेता भरतमोहन अधिकारी भन्छन्, 'कम्युनिस्टहरू एजेन्डामा सहमत हुन सकेनन् । नेपाली परिवेशमा यस्तो देखिए पनि विश्वजगत्मा भने कम्युनिस्टले बहुमत हुँदा पनि संविधान बनाउन सकेनन् भन्ने सन्देश गएको छ ।' नेपालमा कम्युनिस्टको बलियो जनमत बढ्दो रहेको विघटित संविधानसभाको मतपरिणामले पुष्टि गर्छ । तर, त्यसलाई उपयोग गर्न नसक्दा अनेक प्रश्न खडा भएको अधिकारी बताउँछन् ।साढे ६ दशकको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गुट र फुटको लामै शृंखला चल्यो । तर, पनि समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भने यसको खासै असर देखिँदैन । ००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीको जनमत क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । ००७ सालयताको निर्वाचनले त्यही पुष्टि गर्छ । पुष्पलाल श्रेष्ठले विसं ००६ सालमा निरञ्जनगोविन्द बैद्य, शम्भुराम श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय आदि युवकहरूसँग मिलेर भारतको कलकत्तास्थित श्यामबजारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ०१९ सालसम्म अविभाज्य रह्यो । तर, ०१९ सालपछि फुटको यात्रा आरम्भ भयो । अहिलेका दर्जनौँ कम्युनिस्ट पार्टी त्यसकै परिणाम हुन् ।अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट लिने 'लाइन'का विषयमा मतभेद भएपछि ०१९ सालमा तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायमाझी र पुष्पलाल श्रेष्ठबीच विवाद भयो । खासगरी 'रुसी' र 'चिनियाँ' गरी दुई शिरामा शीर्ष नेता विभाजित बने । चीनले लिएको नौलो जनवादी विचार लिनेमा पुष्पलाल र रुसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र अँगाल्ने भन्नेमा रायमाझी लागेपछि भाँडभैलोको स्थिति नै देखापर्‍यो । त्यसले पार्टी फुटको स्थितिमा पुर्‍यायो । त्यसपछि फुटको शृंखला पछिल्लो समय विघटित संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीसम्म आइपुग्यो । एक दशक लामो युद्धको नेतृत्व गरेको एकीकृत माओवादीलाई दक्षिणपन्थी भएको, क्रान्तिको कार्यभार छाडेको, आत्मसमर्पणवादी बनेको जस्ता आरोप लगाउँदै मोहन वैद्यले नेकपा-माओवादी गठन गरे । त्यस्तै, नेकपा -एमाले) बाट उपाध्यक्ष अशोक राई अलग्गिए । तर, उनी आफूले पार्टी नफुटाएको दाबी गर्छन् । उनले त कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छाडेर संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरे । ०२७ सालदेखि पुष्पलालको नेतृत्वमा रहेका नारायणमान विजुक्छे 'रोहित'ले ०३१ सालमा छुट्टै पार्टी बनाए । पुराना कम्युनिस्ट नेता तथा नेकपा एकता केन्द्र मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह सैद्धान्तिक रूपले भन्दा पनि व्यावहारिक कारण्ाले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बढी फुट्ने गरेको बताउँछन् । कतिपय वेला स्वार्थका कारण्ा र आपसी वैमनस्यता कारण्ाले वा कुनै वेला आत्म-असन्तुष्टिका कारण्ाले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुने गरेको उनको अनुभव छ । वामविश्लेषक श्याम श्रेेष्ठ विभिन्न गलत प्रवृत्तिका कारण्ा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने गरेको बताउँछन् । उनको तर्क छ, 'जनवादी केन्द्रीयता, अहंकारको टक्कर, जडसूत्र र यान्त्रिक चिन्तन तथा नोकरशाही प्रवृत्तिका कारण्ा कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको देखिन्छन्,' उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'नेताका स-साना अहंकारजन्य कुराले पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको देखिन्छ ।' आफ्नो जीवनको अधिकांश समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिताएका संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई मानसिकता र सामाजिक संस्कारले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने गरेको बताउँछन । 'मान्यता, आदर्श परिकल्पना छ साम्यवादमा पुग्ने अनि संस्कार छ सामन्तवादी,' राईले भने, 'सामन्तवादी संस्कृतिमा हुर्किएको मान्छेले साम्यवादमा पुग्ने कल्पना गर्दा जुन अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ, जुन 'ज्ञाप' पैदा हुन्छ, त्यसैबाट नेपालका कम्युनिस्ट अनेकौँ टुक्रामा टुक्रिने गरेको मैले महसुस गरेको छु ।'साम्यवादी सोच र पुँजीवादी समाजका कारण विचारको अन्तर्विरोध हुने र सोही कारण कम्युनिस्ट विभाजित हुने उनको बुझाइ छ । उनी मुलुकमा पुँजीवाद पनि पूर्ण रूपमा विकास भइनसकेको अवस्थामा साम्यवादको सपना बोक्दा विचारको अन्तर्विरोध हुने र पार्टी विभाजन हुने उनको तर्क छ ।समयअनुसार चल्न नसक्नु र अहंकार पाल्नुलाई उनी फुटको अर्को कारण मान्छन् । राई भन्छन्, 'सामन्तवादले स्वाभाविक हिसाबले अहंकारमा जोड दिन्छ, व्यक्तिगत अहंकारले मान्छेलाई पिरोल्छ । त्यसमा ठक्कर लागेपछि पार्टी सिसाको गिलास फुटेजस्तो हुन पुग्छ ।' फुटको इतिहास००९ सालतिर पोलिटब्युरोको बैठकबाट संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई पदबाट हटाएपछि विवाद सुरु भएको देखिन्छ । प्रथम महाधिवशेनमा कार्यक्रमको सवालमा मतभेद भएको थियो । दोस्रो सम्मेलनको कार्यक्रममा परिवर्तन किन भन्ने विषयमा मतभेद भएको थियो । दोस्रो र तेस्रो महाधिवेशनमा कार्यक्रम र कार्यनीतिका सवालमा मतभेद देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका मतभेद र त्यसका सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक सवाल एकातिर थियो भने पञ्चायती व्यवस्थाबाट रचिएका षड्यन्त्र तथा अन्तरपार्टी संघर्षको बेठीक पद्धतिले विवाद र विभाजन बढ्दै गयो । नेकपा अनेकौँ चिरामा बाँडियो । राजनीतिक, वैचारिक धारका हिसाबले सुरुमा रायमाझी धार, तुलसीलाल धार, पुष्पलाल धार, मनमोहन धार र मोहनविक्रम धार देखापरे । यी धार पनि अनेक उप-धारमा विभाजित भए । दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीभित्र बहुमतमा रहेको केशरजंग रायमाझी धारले ०१७ सालको प्रतिगामी शाही कदमलाई समर्थन गर्‍यो र दरभंगा प्लेनममा संसदीय व्यवस्थाका निम्ति पहल गर्ने कार्यनीति अगाडि सार्‍यो । तर, प्लेनमले रायमाझीलाई पार्टी महामन्त्रीबाट मुक्त गरी सचिवालयको सदस्यमा राख्यो र नौ महिनाभित्र तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दियो । तर, नेतृत्वले महाधिवेशन गर्न चाहेन । तेस्रो महाधिवेशनबाट यस धारका केशरजंग रायमाझी, डिपी अधिकारी र शम्भुराम श्रेेष्ठलाई क्रमशः तीन, दुई र एक वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरियो । ०२३ सालमा यो धार अलग्गै सम्मेलन गरेर अगाडि बढ्यो । तर, यो धारबाट पनि रायमाझी समूह, मानन्धर समूह र बर्मा समूह बने । रायमाझी समूह पञ्चायतमा विलीन भयो । बर्मा समूह एमालेमा एकीकृत भयो । मानन्धर समूह हाल नेकपा -संयुक्त) का रूपमा रहेको छ ।दरभंगा प्लेनममा सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्का लागि संघर्ष गर्ने धारण्ाा राखेका तुलसीलाल अमात्यले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम तेस्रो महाधिवेशनबाट पारित भयो र तुलसीलाल पार्टी महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र विवाद झनै चर्कियो । उनले 'कुन बाटो ?' भन्ने पुस्तक लेखेर आफ्ना धारण्ाा राखे । उनी तत्कालीन सोभियत संघ पक्षधर नेताका रूपमा चिनिन्थे । तुलसीलाल लामो समयसम्म उक्त धारमा रहे । ०५० सालमा यो धार बोकेको समूह तुलसीलाल अमात्यकै नेतृत्वमा एमाले प्रवेश गर्‍यो ।दरभंगा प्लेनमका वेला मनमोहन अधिकारी जेलमा थिए । तेस्रोे महाधिवेशनमा उनको अलग्गै धार थिएन । ०२२ सालमा पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीले केन्द्रसँग सम्बन्धविच्छेद गरी अलग्गै समूहका रूपमा काम गर्न थाल्यो र त्यसले मनमोहनलाई आफ्नो नेता मान्यो । मनमोहन जेलबाट छुटेपछि देशभित्रै खुला रहेर पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध गतिविधि गर्ने धारणा राखे । ०२७ मा यही पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीअन्तर्गतको झापा जिल्ला कमिटीले विद्रोह गरी झापा आन्दोलन सुरु गरेको थियो । यो धारसमेत मिलेर पछि नेकपा माक्र्सवादीको निर्माण्ा भयो ।दरभंगा प्लेनममा संविधानसभाको निर्वाचनका निम्ति संघर्ष गर्ने कार्यनीति लिनुपर्छ भन्ने धारको जन्म भयो । यसको नेतृत्व गरे मोहनविक्रम सिंहले । जसले तेस्रोे महाधिवेशनमा पनि सोही मान्यता राखेको थियो । यो धार ०२८ मंसिर २० मा केन्द्रीय न्युक्लियस गठन गरी अगाडि बढ्यो । यसले चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको ठहर गर्दै रिमको सदस्यता लिन पुग्यो । यही धारबाट नेकपा -माओवादी) को जन्म भयो । ०४० सालमा यो समूह विभाजित भई चौम -लामा) र मसाल -एमबी) समूह बन्न गए । ०४२ सालमा मसाल पुनः विभाजित भई मसाल र मशाल -वैद्य) बन्न गए । यी तिनै समूहले ०४६ सालमा कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्ने कुराको विरोध गरे । 'साम्राज्यवादी बहुदल' भन्दै ०४७ को संविधानको पनि विरोध गरे । मसाल फेरि विभाजित भई विद्रोेही मसाल -बाबुराम) को निर्माण्ा भयो । यो धार अहिले पनि मोहनविक्रम सिंहकै नेतृत्वमा नेकपा -मसाल) का रूपमा रहेको छ ।दरभंगा प्लेनममा विघटित संसद्को पुनस्र्थापनाका निम्ति संघर्ष गर्ने कार्यनीति लिनुपर्छ भन्ने धारको नेतृत्व पुष्पलाल श्रेष्ठले गरे । तेस्रो महाधिवेशनमा यस धारले विघटित संसद्को पुनस्र्थापना र संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यनीतिमा जोड दियो । तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न नसकी छिन्नभिन्न भएकाले पुनर्गठन गर्नुपर्ने भन्दै यस धारले गतिविधि गर्न थाल्यो । ०२५ सालमा तेस्रो सम्मेलन गरी नयाँ जनवादी कार्यक्रम पारित गर्नुका साथै नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्यो । ०२९ मा चौथो सम्मेलन गरी तेस्रो सम्मेलनको निरन्तरता कायम गरियो । यसैबाट चोइटिएर नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) समूह, मुक्तिमोर्चा समूह, बर्रे संघर्ष समूह आदिको जन्म भयो । प्रेम गौतम
दोस्रो स्थानकेन्दि्रत सुपर लिग